Alote Myanmar - မြန်မာနိုင်ငံသားများအတွက် Logistics, Warehousing, Port အလုပ်အကိုင်များ
ကုန်ပစ္စည်းထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး၊ ကုန်သိုလှောင်ရေး၊ ဆိပ်ကမ်းပိုင်းဆိုင်ရာ Jobs in Myanmar
ကုန်ပစ္စည်းထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး၊ ကုန်သိုလှောင်ရေး၊ ဆိပ်ကမ်းပိုင်းဆိုင်ရာ အလုပ် 88 ခုရှာတွေ့ပါသည်။
သင်္ဘောလုပ်သား | Shipping Executive
• Customer များ၏ Logistics ပိုင်းနှင့်ပတ်သက်သော ပြဿနာများအတွက် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။ • Customer များ၏ ပြဿနာများ၊ မေးမြန်းချက်များကို ဖြေရှင်းရန်အတွက် Customer service, Quality, Planning နှင့် Purchasing တို့နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။ • Stock Shelves များ၊ ပုံးများစုစည်းခြင်းနှင့် inventory ဆောင်ရွက်ခြင်းများကို လုပ်ဆောင်နိုင်ရမည်။ • တင်ပို့မှုများအတွက် ကုန်ပစ္စည်းများကို ပြင်ဆင်ရာတွင် sales order အတိုင်း ဆောင်ရွက်ရမည်။Responsible for all routine vehicle maintenance of the delivery truck, van, and motorcycle • Provide support to the Sales Department in servicing clients as required •Provide suggestions within area of responsibility to Logistics Manager as needed • Support effective resource management and assist with the planning of work within dispatch through load creation • Responsible for the coordination of incoming goods and daily dispatches as per requirements • Follow procedures in processing all non-conforming goods or returns as required • Provide support in the planning and tracking of the shipment of finished orders. • Responsible for keeping appropriate documentation and logs to support all planned finalized orders • Responsible for the interpretation and analysis of relevant departmental KPI’s and proffer recommendations accordingly • Stay current with knowledge of dispatch, logistics planning, and effective supplier management • Responsible for providing accurate reports to track performance and enable decision making • Actively participate in continuous improvement and problem-solving activities within the unit.
(၁) ကုမ္ပဏီ၏ စံချိန်စံညွှန်းနှင့်အညီ ဂိုဒေါင်ကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်း။ (၂) ကုန်ပစ္စည်းလက်ခံခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်း၊ ဖြန့်ဖြူးခြင်း နှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်းစသည့် အခြေခံလုပ်ငန်းများကို ကြီးကြပ်ခြင်း။ (၃) ကျန်းမာရေးနှင့်ဘေးကင်းရေး၊ လုပ်ငန်းခွင်သန့်ရှင်းသပ်ရပ်မှုရှိပြီး လုံခြုံရေးဆိုင်ရာစံနှုန်းများကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ခြင်း။ (၄) သိုလှောင်ရုံနှင့် သိုလှောင်ရုံအဖွဲ့အစည်းကို တာဝန်ခံခြင်း။ (၅) ဒေတာသိုလှောင်မှုစနစ်ကိုပုံမှန် Update လုပ်ခြင်း။ (၆) အစီရင်ခံစာများနှင့် စာရင်းအင်းများကို ပုံမှန် ထုတ်ပေးခြင်း။In/Out အခြေအနေ အစီရင်ခံစာ၊ dead stock အစီရင်ခံစာ။ (၇) Feedback ရယူပြီး ဝန်ဆောင်မှုများ၏ အရည်အသွေးကို စောင့်ကြည့်လုပ်ဆောင်ခြင်း။ (၈) လုပ်ငန်းခွင်စွမ်းဆောင်ရည်ကို စောင့်ကြည့်ပြီးဝန်ထမ်းများတိုးတက်စေရန်လေ့ကျင့်ရေးမှအစပျိုးမှုများကိုဦးဆောင်ခြင်း။ (၉) ကုန်ပစ္စည်းများကို မမှားယွင်းဘဲ အချိန်နှင့်တပြေးညီတင်ပို့နိုင်စေရန်အတွက် အခြားဌာနများနှင့် ဆက်သွယ်ခြင်း။
အကျိုးအမြတ်: စွမ်းဆောင်ရည်အတွက် ဆုလာဒ်များ။